बाबुराम र प्रचण्ड मिलेर एमालेलाई सिध्याउने भए:डाक्टर सुरेन्द्र केसी (भिडियो) « Light Nepal
बाबुराम र प्रचण्ड मिलेर एमालेलाई सिध्याउने भए:डाक्टर सुरेन्द्र केसी (भिडियो)
Published On : 11 October, 2017 1:32 pm
By : लाइटनेपालडटकम
विशेषतः नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबारे गहन अध्ययन गर्नु भएका प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले हालको वाम एक प्रक्रियालाई कृत्रिम बताइरहनु भएको छ । डा. केसीका मूलभूत धारणाहरु निम्नानुसार छन्:
‘माओवादीको कांग्रेससँग भएको गठबन्धन लामो समय चल्ने बताइएको थियो । दुई महिनामै धरापमा पर्यो । प्रचण्डले ओलीलाई समाते, लगत्तै शेरबहादुरलाई समाते । अहिले देउवाको सरकारमा बसेकै बेला प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरेका छन् । लोकतन्त्रमा यहाँ भन्दा लाजमर्दो के होला ? १५ दिन अघिसम्म पनि एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग मिल्नु परेको प्रचण्डले भन्ने गरेका थिए । तर उनी त भित्र भित्रै कांग्रेस सिध्याउन पो लागेका रहेछन् । कति चाँडो कित्ता फेर्छन् प्रचण्ड ।
यो प्रक्रियाले तत्काल सरकारमा असर पार्छ । अलि पछि कांग्रेसले पनि गठबन्धन बनाउँछ । वाम–कांग दुई समूह बन्ने भयो । तत्कालका लागि भने माओवादी र कांग्रेसको सम्बन्ध बिग्रने निश्चित छ । अहिलेको वाम गठबन्धनको प्रक्रिया स्वाभाविक छैन । यो दिगो पनि हुँदैन । दिगो हुन बाबुरामले नै दिँदैनन् । यो प्रक्रियामा बाबुरामलाई किन मिसाइएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । बाबुराम भन्दा पनि जात मिल्ने त सिपी मैनाली थिए । चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे, विष्णुबहादुर मानन्धर, उपेन्द्र यादव, अशोक राईलगायत थिए । तर एमाले र माओवादीले बाबुरामलाई टिपे । किन टिपे रहस्यमय छ ।
पार्टीहरुबीच सहकार्य, एकता हुनु अनौठो भएन । तर अहिलेको एकताको कुरा राष्ट्रहितका लागिभन्दा पनि स्वार्थहितकालागि भएको देखिन्छ । यसमा देश, जनता र सबैको हित जोडिएको छैन । यसमा जोडिएको भनेको नेताहरुको स्वार्थ हो ।
राजनीतिक घटनाहरुको कारक बाहिरी भन्दा भित्री विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको इतिहास हेर्दा पनि कतिपय अवस्थामा बाहिरीको भूमिकाले पटकपटक काम गरेको छ । डा. केआइ सिंह नै तिब्बत हुँदै चीनको शरणमा गएका थिए । अरुले पनि भारतलाई आफ्नो रणनीतिक पार्टनर बनाए । केहीले यो काम चीनको दबाबमा भएको हो भन्छन् । बाबुराम पनि यसमा सहभागी भएका कारण यो काम भारतको हो जस्तो पनि लाग्छ ।
अहिलेको एकता प्रयासले घाटा एमालेलाई हुन सक्छ । प्रचण्डको विगतका क्रियाकलापले पनि त्यस्तै पुष्टि गर्छ । ओलीसँग हुँदाहुँदै उनकै सरकार ढाले । आफू प्रधानमन्त्री बने । देउवाको काँध चढेर प्रधानमन्त्री बने तर लोकमान प्रकरणमा एमालेसँग मिले । देउवालाई सघारहेको बेला एमालेसँग एकता नै गर्न अगाडि बढे । यस्ता कामले उनले एमाले सिध्याउने त हैनन ? भन्ने शंका छ ।’
प्रेम परियारको चित्त दुखायो नाई नभन्नु ल ५ ले : नाई नभन्नु ल ५मा रेकर्ड भैसकेको गित हटाउँदा दुखि बने प्रेम परियार, भावुक हुदै मिडियामा यसो भएन (भिडियो)
काठमाडौ – ‘नाई न भन्नु ल -२’ मा केही गीत गाउने मौका पाएपछि रातारात स्टारको
म्याच फिक्सिङको आरोपमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापा भन्छन्, “हिजो देशका लागि हिरो थिए आज जिरो भए” भन्दै भावुक भए (भिडियो सहित)
काठमाडौ – म्याच फिक्सिङको आरोपमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापा प्रहरी फन्दामा परेको
‘अबको धार्मीक,सास्कृतीक र पर्यटकीय गन्तव्य ताप्लेजुङको पाथीभरा’
पूर्वको सुन्दर र रमणीय पहाडी जिल्ला, ताप्लेजुङ । जहाँ कञ्चनजंघालगायत ५ हजार मिटर माथिका मात्रै
राजेश हमालकाे नजरमा प्रधानमन्त्री अाेली जत्तिको क्षमतावान नेता अरु छैन, हमालले किन यस्ताे भने ? हेर्नुहोस भिडियोमा
काठमाडौं – नेपाली चलचित्र जगतका महानायक राजेश हमालले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण स्वतन्त्र र बराबरीको
सरकारले तोकेबाहेक प्रदेश नम्बर २ मा
यस्तो बफादार कुकुर : जसले हराएकी
बस वालाको सिन्डिकेट पछि अब ट्याक्सीको
पशुपतीनाथ दर्सन गर्न गाएक तथा संगीतकार
आखिर किन मुम्बईवाट अचानक नेपाल आइन्